Fundraising Volunteer – KuMel
အလုပ်အကိုင် – ရန်ပုံငွေရှာသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း
ဝန်ထမ်းအရေအတွက် – ၁ ဦး
အလုပ်ချိန် – မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အချိန် (အနည်းဆုံး တစ်ပတ်လျှင် ၁၆ နာရီ)
နေရာ – မိမိ နေအိမ်
အလုပ်ကာလ – ၃ လ
လစာ – လစာမဲ့ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း
Covid-19 အကြပ်အတည်းကာလ အတွင်း Khiri Travel Myanmar မှ ဝန်ထမ်းများက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလတွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အကျိုးအမြတ်မယူဘဲ ရပ်တည်နေသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရပ်ရွာ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများမှ လိုအပ်ချက်များ နှင့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်း၏ စိတ်ဝင်စားမှုများကို ကိုက်ညီစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ပလက်ဖောင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်များ နှင့် ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှ တဆင့် အခမဲ့ ရှာဖွေ ပေးနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
KuMel Volunteer Connection အဖွဲ့အစည်း ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် ရန်ပုံငွေရှာရန်၊ ရပ်ရွာ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ အတွက် လိုအပ်သော ထောက်ပံ့ကြေးများကို ထောက်ပံ့ပေးရန်
အခန်းကဏ္ဍ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ
ရန်ပုံငွေ စီမံကိန်းများ အတွက် အတွေးအခေါ်သစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပြီး အလားအလာ ရှိသော စပွန်ဆာများကို ရှာဖွေရန်
ရန်ပုံငွေ အစီအစဉ်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူ Zoom သို့မဟုတ် Skype မှ တဆင့် ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် နှင့် ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာတွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ (သို့မဟုတ်) အခြား မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို အလားအလာရှိသော စပွန်ဆာများဆီသို့ ရေးသားပေးပို့ရန်
အလားအလာ ရှိသော ရန်ပုံငွေများ အတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ (သို့မဟုတ်) စပွန်ဆာများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် (လိုအပ်ပါက ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့ဆုံရမည်)
လိုအပ်ပါက အစီရင်ခံစာများ (သို့မဟုတ်) တင်ပြချက်များကို ပြင်ဆင်ရန် နှင့် ရန်ပုံငွေရှာခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို စစ်ဆေးရန်
သင်ရဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သို့ တင်ပြရန်
အလှူရှင်များကို “ကျေးဇူးတင်ကြောင်း” စာလွှာ ပေးပို့ရန်
ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေခြင်း ကဏ္ဍတွင် အတွေ့အကြုံ ၁-၂ နှစ် ရှိရမည်
အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး ပြောဆိုဆက်ဆံရေးပါ ပြေပြစ်မှု ရှိရမည်
အတွေးအခေါ်ကောင်းများ ဖန်တီးနိုင်ပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်များကို ရေးသားနိုင်ရမည်
မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အသေးစိတ် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်
အင်္ဂလိပ်စာ အပြောနှင့် အရေး စွမ်းရည် အသင့်အတင့် ရှိရမည်
ရှိပြီးသား ကျွမ်းကျင်မှုများကို အသုံးပြုပြီး အတွေ့အကြုံသစ်များလည်း ရရှိခြင်း
လူသစ်များနှင့် တွေ့ဆုံပြီး မိတ်ဆွေပေါများ လာခြင်း
ကွဲပြားသော ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေမှုများကို လေ့လာနိုင်ခြင်း
မတူညီသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး မိမိ ကိုယ်ကို စိန်ခေါ်ခြင်း
KuMel Volunteer Connection မှ ပေးအပ်သည့် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ရရှိခြင်း
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပါ CV form ကို info@kumelmyanmar.org သို့ email ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ KuMel Volunteer Connection Facebook Page သို့ ဖြစ်စေ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Job Title : Fundraising Volunteer
Working Hours : Flexible time (at least 16 hours per week)
Location : At your home
Working Periods :3months
Salary : Unpaid role asavolunteer
A non-profit organization founded in April 2020 by staff of Khiri Travel when Covid-19 crisis started in Myanmar. We match the volunteer’s interest and organizations or projects’ needs through our free platform websites and Facebook page
To raise funds for KuMel Volunteer Connection in the long run, support the communities and necessary allowances for volunteers
Produce and identify new ideas for funding projects to persuade potential sponsors
Do discussions with team members for funding plans or activities by Zoom or Skype
Write the professional messages, press releases or other promotional campaign to be uploaded in our website and Facebook page to reach to our potential sponsors
Communicate with external organizations or sponsors for potential funds smoothly (if necessary, you must meet in person)
Prepare reports or presentations if necessary and monitor the process of fundraising plans
Report team leader the daily process of your work
Write and send “Thank You” letter to donors
1-2 years’ experience in the field of fundraising projects
Creative ideas and persuasive writing including press release writing
Learn different sources of raising funds
Engage in different organizations and challenge yourself
Get recognition letter of KuMel Volunteer Organization
Please send your CV to info@kumelmyanmar.org by email or KuMel Volunteer Connection by Facebook.
Job Category Charity, Community, Environment
Email / အီးမေးလ်
Work Experience / အလုပ်အတွေ့ကြုံ